IMEX (Myanmar) | Myanmar Yellow Pages | 2019 Myanmar Yellow Pages Mobile Application (IOS and Android Version) is available on the App store and Google Play Store for free
2019 Myanmar Yellow Pages Mobile Application (IOS and Android Version) is available on the App store and Google Play Store for free
Feb 6, 2019 Our Latest New
2019 Myanmar Yellow Pages Mobile Application (IOS Version) has been released online. This is the very useful app for Mobile users as they can easily search data they want to know. Download now on App store for free. In this new version app, we added new features like; touch to call system, Business Categories in English and Myanmar, Products and Services description
Special Features of 2019 MYP App
Products and Services of the business companies are described together with the basic information; Company Name, Address, Contact Phone Number, Email Address and Website
Users can easily makeadirect phone call withasingle touch with your finger on the number
Social Network links are described. ( Facebook Page or account, Youtube, Instagram ) User can save the favorite data after searching through our app by tapping the favorite button for the later uses.
Business Types can be found in two languages- Myanmar and English and it will be very helpful and convenient for both local and overseas users. Android and IOS version are available. Download Myanmar Yellow Pages Directory now for free.
2019 ခုနှစ်အတွက် Myanmar Yellow Pages Mobile Application (iOS Version) ထွက်ရှိလာပါပြီ။ သိရှိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်သောကြောင့် Mobile ဖုန်းအသုံးပြုသူများရဲ့ အားထားရာ လမ်းညွှန် App တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Myanmar Yellow Pages Mobile App iOS Version (Update) ကို App Store တွင် အခမဲ့ Download ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ ၎င်း App တွင် Touch to call System အပြင် English - Myanmar လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်အညွှန်း၊ Products & Service ကဏ္ဍ အသစ်များ ပါဝင်လာပါတယ်။
Myanmar Yellow Pages Mobile Application ( iOS & Andoird Version ) ထွက်ပြီ
Myanmar Yellow Pages Mobile Application တွင် ပါဝင်သည့် ထူးခြားချက်များ
- စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ကြော်ငြာများထည့်သွင်းရာတွင် ကုမ္ပဏီနာမည် လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များအပြင် ထုတ်ကုန် ပစ္စည်းများ၊ ၀န်ဆောင်မှုအကြောင်းကို အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြင့် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ထည့်သွင်းကြော်ငြာပေးနိုင်ပါတယ်။
- ဖုန်းနံပါတ်များတွင် Touch to Call စနစ်ပါရှိခြင်းကြောင့် အသုံးပြုသူ Users များအတွက် App မှတဆင့် တိုက်ရိုက် ဖုန်းခေါ် ဆိုနိုင်ပါတယ်။
- Social Media Link ပါရှိခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ Facebook Page များကို ၀င်ရောက်ပြီး မိမိသိရှိလိုသော အချက်အလက်များအား ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
- Favorite Button သည် မိမိရှာဖွေထားသော အချက်အလက်များတွင် Favorite button နှိပ်ထားခြင်းဖြင့် နောက်တခါ search လုပ်စရာမလိုပဲ home screen အောက်တွင် ရှိသော Favorite တွင် လွယ်လင့်တကူ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
- လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတွင် မြန်မာစာစနစ် ပါရှိလာဖြင်းကြောင့် မိမိ ရှာဖွေလိုသော လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများအား လွယ်ကူ လျှင်မြန်စွာ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ Zawgyi & Unicode နှစ်မျိုးစလုံးတွင် ကြည့်ရှုရန် အဆင်ပြေပါသည်။
( iOS Version နှင့် Android Version ) ကို Download ရယူနိုင်ပါပြီ။
Android Version and iOS Version